Chautari Daily » बिरामीलाई खाना लगिदिने रोबर्ट बनाउँदै महाबिर पुन (भिडियो हेर्नुस)
बिरामीलाई खाना लगिदिने रोबर्ट बनाउँदै महाबिर पुन (भिडियो हेर्नुस)
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितलाई खाना वा अन्य सामग्री पुर्‍याउनका लागि रोबाेट बनाउन सुरु गरेको छ । आइसोलेसन वार्डमा रहेका संक्रमित बिरामीलाई खाना पुर्‍याउने यो रोबाेट २–३ दिनभित्र तयार हुने आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले जानकारी दिए ।
‘आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितका लागि खानासहित विभिन्न सामग्री पुर्‍याउने रोबाेट बनाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले पार्टपुर्जा जोड्ने काम भइरहेको छ । १/२ दिनभित्र हामी तयार गरिसक्छौँ ।’
सुरुवातमा परीक्षणका लागि एउटा रोबाेट बनाउन लागिएको आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले बताए । उनका अनुसार रोबाेट निर्माण भएपछि सैनिक अस्पताल छाउनीमा परीक्षण गरिनेछ ।
त्यस्तै, केन्द्रले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि थप २ काम पनि पूरा भएको जनाएको छ । केन्द्रले कोरोना संक्रमितका लागि आवयश्यक पर्ने एरोसोल बक्स र इमर्जेन्सी भेन्टिलेटर तयार भएको जनाएको हो ।
सितिमिति भाबुक नहुने म आज बिहानै एक छिन भाबुक बनें: कारण पढ्नुहोस.
एक जना भाइले दक्षिण कोरिया बाट बिहानै फोन गरेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको खाता नम्बर मागे र कोरोनाको लागी २ लाख रुपैंया पठाई दिन्छु भने. मैले “तिमीले दुख गरेर कमाएको पैसा दान गर्ने नै हो भने अलिकति पैसा दान गर, त्यति धेरै पैसा नपठाउ, बरु तिम्रो परीवारलाई पठाई देउ” भनेर भने. उनले मरो परिवार छैन भने. अनि मैले “तिम्रो बाबा आमा लाई पठाई देउ न त” भनेर सम्झाएँ. उनले यसो भने – “बाबा ता मैले देखे कै होइन, आमाले पालेकी हुन् र उनी पनि स्वर्गमा छिन. मेरो आमा भने कै नेपाल आमा हुन् र आमालाई दुख परेको बेलामा यति सानै रकम भए पनि दान गर्न चाहन्छु.”
मैले ति भाईलाई बिभिन्न तरिकाले सम्झाई बुझाई गर्दै यसो भनें – “एक लाख मात्र दान गर र त्यो भन्दा बढी नगर, बरु सके जति पैसा बचाउ र देशमा नै आएर केहि गर”. धेरै नै सम्झाए पछि उनले एक लाख रुपैंया मात्र दान गर्न माने.
ति भाईले जिन्दगीमा धेरै दुख पाएको र हण्डर खाएको अनुमान गर्न सकिन्छ. त्यसै कारणले नै म एकछिन भाबुक बनेको हो किन भने मैले पनि जिन्दगीमा मैले धेरै नै हण्डर र ठक्करहरु पाएको छु र जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सितिमिति म भाबुक र बिचलित हुँदै हुँदैन. कसैको पनि हण्डर र ठक्कर नखाएको जिन्दगी कुनै जिन्दगी नै होइन भन्ने मान्यता राख्छु मैले र यो एकदमै सत्य कुरा हो. कसैले फेरी व्यंग र हाँसो नगर्नु होला. धन्यबाद.
प्रकाशित मिति ५ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०९:२८